Markii aan dejinay Mashruuca Dokumentiga Fanka ee Gobolka, anagoo la shaqaynayna qaar ka mid ah Farshaxannada Farshaxanka ee McKnight 30kii sano ee la soo dhaafay, waxaan isla markiiba aragnay fursad aan ku qancin karno xiisahayaga ku saabsan Bill Cottman iyo qoyskiisa. Waxaan la kulanay Bill, xaaskiisa Beverly, iyo inantooda Kenna sannadkii hore markii ay sameeyeen sheeko taariikh nololeed oo hoos timaada magaca Siyaabaha Wadajira at at Give & Take xaflad aanu ka abaabulay waqooyiga Minneapolis. Waxaan si dhaqso ah u garaacnay sheekadooda.
Bill iyo Beverly labaduba waxa ay samaynayeen fanka sanado badan, laakiin waxa ay sameeyeen iyaga oo ku guda jira xirfado guul leh oo saynis iyo injineernimo, iyo sidoo kale doorka nolosha bulshadooda. In kasta oo xaqiiqda ah in aanu farshaxanku udub dhexaad u ahayn noloshooda shaqo, waxay korin lahaayeen gabadh sidoo kale ah farshaxan, waxayna ku guuleysteen inay helaan wakhti ay ku qanciyaan rabitaankooda hal-abuurka ah. Gurigooda, oo ay u yaqaaniin SALON1016: Kulan xilliyeed ah oo ay isugu yimaadaan dadka fanka iyo suugaanta, ayaa u muuqday xarun faneed iyo dhaqan halabuureed.
Bill iyo Beverly ayaa sheekadooda u sheegay inay qayb ka tahay waxqabadkooda Kenna habeenkaas. Shanai waxaan ka tagay awoodin inaan joojiyo fikirka iyo hadalka ku saabsan qoyska Cottman. Qayb ka mid ah jaahilnimadeena waxay u egtahay in yar oo xaasid ah - waxay u muuqdeen in ay ku nool yihiin adduunka oo farshaxanku uu yahay hadiyad, wax la socdo sababo shakhsi ah, laakiin taasi waxay ku xireysaa guriga, qoyska iyo bulshada.
Waxaan markaas ka yaabnay: Waa noocee guri ee qoysku abuuri karo? Sidee bay u dareemaan inay yihiin wada shaqeeye hal abuur leh? Maxay tahay sida loo sameeyo farshaxanka oo mar walba shakhsiyan ah, iyo qayb ka mid ah sheeko aad u weyn? Waa maxay sheekadan weyn? Sideebay doorashooyinkii horay u soo jiidheen waddooyinka kale waxay saamayn ku yeeshaan dareenka noloshooda? Maxaan dhamaanteen wax ka baran karnaa sheekadooda?
Gelitaanka habka samaynta qoraalkan iyada oo aad u xiiso badan si loo qanciyo, waxay u badan tahay nacasnimo in la rumaysto in aan ku dhammaaneyno 5-10 daqiiqo muuqaal ah, qorshahayagii aan ku heshiinay McKnight. Ka dib markii uu waqti la qaatay Bill iyo qoyskiisaba, waxaan ogaanay sida qotoda dheer ee dhexdhexaadinta farshaxanku uu yahay geedi socodka samaynta nolol macno leh, iyo sida ay u adagtahay inay kakoobaan qulquladan qaniinyada qaylada.
Waxa aynu ku dhamaysannay abuurista Bill waa wax badan oo ka sii badan oo aan ka fileyno, laakiin mid ka mid ah nin ku habboon, sida hal qof oo raba, "waxay u egtahay in uu joojiyo wakhti marka uu galo qol." wuxuu taabanayaa mawduucyo badan: Bill uu la socdo qoyskiisa mawduuca mowduucyada, helitaanka dhaqano sii kobciya asxaabtiisa gudaha iyo Injineer, xidhiidhkii cimrigiisa dheer ee uu la lahaa munaaradda IDS-ka iyo skyline Minneapolis tusaale ahaan sida uu u arko una diiwaan galiyo aragtidiisa adduunka, siyaabaha khiyaanada leh ee uu ugu hagayo carruurtiisa iyo kuwa uu awoowaha u yahay ee danahooda gaarka ah. Laakiin hal shay oo si gaar ah noo soo jiitay ayaa ahaa fikradihii Bill ee ku saabsan ganacsiga-ganacsiga ee fanaaniinta mararka qaarkood la weydiiyo inay sameeyaan:
Waqtigeyga, waxaan dhihi doonaa waxaan u hoggaansamey talooyinka si aan u qaado waddo wax ku ool ah oo aan raadsado hantida dhaqaalaha, u oggolow hantida ruuxiga ah inay sameeyaan waxa ay tahay. Kenna aad bay ugu dhiiran tahay maskaxdayda, sababtoo ah si ka duwan ayaa loo doortay. Waxa ay dooratay in fankeeda, dheeshadeeda, ay xuddun u noqoto waxa ay tahay, iyo wixii hanti dhaqaale ee ka soo baxaba ay nafteeda ku qanciso. Aniga taasi waxay ii tahay muujinta geesinimada aanan lahaan jirin xilligaas, markii aan go'aamadaas qaadanayey.
Shanai iyo aniga waan hubin karaa arrintan. Bishii Disember 2010, labadeenaba waxaan ka tagnay xirfado guulo leh (anigoo ah naqshad iyo Shanai oo ah barnaamijka guud iyo filim sameeyaha ka shaqeeya matxafyada) si ay diirada u saaraan Isku-dhafka Hawlaha Fulinta. Waxaan ku noolnahay kor iyo hoos u dhaca go'aanka maalin kasta. Waxaan u maleyneynaa inay jiri karto su'aalahan oo dhan, waxayna jeclaan lahayd inay maqasho fekerkaaga:
Maxay yihiin qaar ka mid ah ganacsiyada aad samaysay farshaxan ahaan? Fanaanku ma inuu kala doortaa hantida dhaqaale iyo tan ruuxa? Sidee bay kuugu ekaanaysaa geesinimada raadinta nolol macno leh?
Waxaan rajeyneynaa inaad ku raaxeysanaato inaad ogaato Bill Cottman iyada oo loo marayo buuggan, waxaanna rajeyneynaa inaan maqalno ficiladaada fikradaha iyo mawduucyada soo baxa.